Maxaa ka dhigay qiimaha meherka Soomaalida kan ugu sareeya qoowmiyadaha Bariga Afrika? - BBC News Somali
Maxaa ka dhigay qiimaha meherka Soomaalida kan ugu sareeya qoowmiyadaha Bariga Afrika?
Image caption Meelaha qaar sida Balad Xaawo ayaa la jaangooyay qiimaha meherka, raqiis ayaana laga dhigay
Waxaa jira walwal weyn oo laga qabo qiimaha kor u kacaya ee meherka ee gudaha dalka Kenya, balse kororka qiimaha iyo guurka oo qaaliyoobaya waa dhibaato ka jirta guud ahaan waddamada Bariga Afrika.
Balse Soomaalida ayaa la sheegay in gaar ahaan guurkooda uu yahay kan ugu qaalisan marka la barbar dhigo qoowmiyadaha kale ee dalalkan ku nool.
Hoggaamiyaha aqlabiyada baarlammaanka, Aadan Ducaale ayaa sheegay in arintaasi tahay bilowga in dhallinta ay ka niyad jabaan guurka, wuxuuna sheegay in aysan maaangal ahayn in wiilka gabadha guursanaya in lagu xiro meher dhan $10 kun oo doolar.
Wuxuu ku cawday in qarashka badan ee la qaado uu ka dhigay arrinkaasi soo jireenka ah inuu noqdo ''hawl dhaqaale laga tabco oo gaarsiisan ilaa malaayiin doolar''.
Dhallinyaro badan ayaa ka baaqsaday ama ka daahay guurka, sababtuna tahay dhaqaalaha badan ee lagu xiro marka ay gabdhaha guursan maagaan.
Nepal oo lagu dhaliilay guurka gabdhaha yaryar
Gabar Soomalaiyeed: Ragga xaasaska leh ayay iigu baxdaa
Haddaba waxaan halkan is barbar dhig ku samaynaynaa dalalka Bariga Afrika qaarkood, iyo qiimaha meherka sida ay kala yihiin.
Image caption Soomaaliya waa meelaha meherka ugu qaalisan
Tirada geela ama lacagta caddaanka ah ee ninka uu ballan qaado inuu u siiyayo haweeneyda uu guursanaayo meher ahaan ayaa inta badan ah moowduuca ugu badan ee laga gorgortamo reer kasta oo unkamaya.
Qasab ma ahan in meher durba la bixiyo laakiin waa ballan loo qoray, marka waxaa ninku uu ku qasban yahay inuu bixiyo inta ay isqabaan gabadha.
Waxaase dhacda in gabadha ay meherkeeda hesho marka la furayo ama marka uu ninka dhinto.
Dhaqamada aadka u ad adag ee Soomaalida qaar ee raacatada ah, waxaa jira waxyaabo dheeraad ka ah meherka oo hanti ah oo laga bixiyo gabadha, waxaana ka mid ah yaradka gabadha oo loo bixiyo 100 halaad oo geel ah, faras iyo qori.
Balse bulshooyinka beeralayda ah iyo kalluumaysata ah taas waa ay ka duwanyihiin, waana ka qafiifsanyihiin.
Waayihii hore waxaa meherka lagu bixin jirin neef geel ah amaa neef kale oo ishkin ah, laakiin waayahaan qaabkaa waa uu isbaddalay oo lacag caddaan ah ayaa aad loogu isticmaalaa arrinkaa bulshadaasi dhexdeeda.
Wiil ayaa waxaa laga dalbi karaa inuu bixiyo ilaa 4 kun oo doolarka Mareykan ah uuna siiyo haweeneyda uu guursanaayo. Mar kasta oo uu sii kordho qiimaha meherka ayaana ay u arkaan gabadha la guursanayo iyo qoyskeedu sharaf weyn, waxayna muujisaa taasi qiime sare inay leedahay haweeneyda la guursanayo.
Waxaa marar badan lacagta lagu daraa dahab garaamkiisu kala duwanyahay, kaas oo markale qiimaha sare usii qaadaya.
Inkasta oo Soomaalida inteeda badan ay gashay dabaqad sare oo nolosha ah, qaarkoodna u talaabeen dabaqada dhexe , ayaa haddane qiimaha sareeya ee meherka uu dhalinyaro badan ku kalifay in aysan guursanin, iyaga oo ka door biday in ay tahriibaan si ay lacago usoo shaqaystaan.
Tanzania, waa dal kale oo meherku inuu aad u kordhayo laga dareemayo qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan.
Laga yaabaa in ay taasi tahay sababta keeneysa in dhallinyarada qaarkood aysan si rasmi ah u guursan.
Waxaa badan halbeegyada lagu cabbiro qiimaha meherka laga qaadayo nin dhallinyaro ah, tusaale ahaan qaar ka tirsan bulshooyinka ama beelaha - midabka caddaanta gabadha waxaa ay keeneysaa in meherku bato, laakiin sidoo kale heerka aqoonta waxbarasho ee gabadha ayaa kujira. Waana taas waxa ay dadka reer Tanzania kaga duwanyihiin Soomaalida oo iyagu eega qoyska ay gabadha ka dhalatay ama halka uu ka yimid wiilka, gaar ahaan haddii uu qurbaha ka yimid.
Qiyaas ahaan waxaa wiilka laga dalbaa inuu bixiyo lo' ama lacag dhan inta u dhexeysa 5 milyan oo shilin ilaa 20 milyan oo shillinka Tanzania ah oo u dhiganta $8,844 doolar.
Dhaqankaan waa caadi dalka Uganda, gaar ahaan beelaha daggan meelaha miyiga ah , laakiin sidoo kale waxaa meherka badan la bixiyaa magaalooyinka gudahoodana.
Meherka ayaa dalkaas waafaqsan dhaqan soo jireen ah - oo ah in aad wax bixiso si gabar laguu siiyo.
Laakiin haatan waxaa jira qaab qaar qoysasku ay kukala dhigtaan xeerar ninka guursanaya kaasoo la mid ah xaqiijinta inuu bixin doono meherka laga rabo.
Waxaa la aaminsan yahay in hadii xaasku ka cararto ninkeeda markii ay murmaan kadib ayna unoqoto reerkooda, qoyskeeda ay tahay inuu soo celiyo wixii meher ahaan loo siiyay oo dhan.
Sanadkii 2010, maxkamad ku taala dalkaas ayaa soo saartay go'aan ah in bixinta meherka uu yahay wax xalaal ah, laakiin garsooreyaashii ayaa mamnuucay qaabkaa ah soo celinta meherka markii uu guurku burburo ama hallaabo.
Lahaanshaha sawirka AALTONEN JUMBA
Image caption Waxaa jira lammaane isku mehersaday Ksh100 ($10 doolar) dalka Kenya
Dastuurka Kenya qasab kama dhigayo bixinta meherka laakiin waa wax la fahamsan yahay in meher la bixiyo beelaha kala duwan ee dalka.
Qaar ka mid ah beelaha tusaale ahaan kuwa ah xoolaleyda ayaa dhiirogaliya in meherka xoolo lagu baxiyo, iyadoo beelo kale maal, lacag caddaan ah iyo xataa macdan (sida dahab iwm) loo qaato sidii meher.
Waxaa jira dareen ah in uu jiro qarash laga bixiyay haweeneyda si ay u aado ninka.
Anne iyo Wilson Mutura dad badan ayaa ay farxad galiyeen kadib markii 100 shilin oo lacagta Kenya ah ay u isticmaaleen inay ku dhigtaan aroos sanadkii 2017
Meherka waxaa dalkaa looga yaqaan "lobola", oo ninka ayaa siiya hanti ama lo' qoyska gabadha ama marmar xataa isku darka labadaas-hantida kale iyo lo'da - arrintaasoo muujinaysa inuu diyaar u yahay guurka gabadhaa. Waxaaba xitaa jira filim laga jilay arrinkan oo magaciisu yahay Fanie Fourie's Lobola , kaas oo gabadh madoow ah iyo wiil caddaan ah ay is calmanayaan, gabadha aabaheedna uu codsanayo 65 neef oo lo' ah.
Bixinta Lobola waxaa ay tilmaan u tahay sida uu ninku isaga xil saarayo inuu u khidmeeyo xaaskiisa waxaana sidoo kale loo arkaa inay tilmaan muhiim ah oo loo baahan yahay u tahay sii wadida dhaqanka , ee maahan inuu gabar soo iibsanaayo.
Meher waa maxay?
Dhaqanka bixinta meherka ayaa ka jira dalal badan oo caalamka ah oo ay kujiraan kuwo ku yaala qaarada Asia, Bariga Dhexe iyo qeybo ka tirsan Afrika iyo weliba qaar ka tirsan jaziiradaha badda pacific-ga.
Inta la bixinaayo ayaa kala duwan una dhexeysa hadiyad yar oo dhaqankaasi horay loogu sii wadayo ilaa kummanaan kun oo doolarka Mareykanka ah.
Laga soo bilaabo waayo hore, bixinta meherka ayaa noqday dhaqan la qaddariyo aadna loo dhowro xataa bulshooyinka waxbartay oo ku nool nolosha casriga ah ay dhowraan kuna dhaqmaan.
Caadiyan, meherku waa sidii heshiis is waafaqid ah ka hor guurka kaasoo maal sida lo' geel, ari ama xataa lacag caddaan ah uu bixiyo ninka guursanaya uuna siiyo gabadha uu guursanaayo .
Hadii uu ninku kasoo bixi waayo bixinta meherkii laisku raacay muddadii loo qabtay, waxaa jira beelo usoo cesha gabadha gurigooda ilaa ninku uu ka soo dhammeystiro ama bixiyo meherka.
Dadka qaar ayaa u kuurgalayay isbadalada ku dhacaya qiimaha meherka oo markasta sare usii kacaya, waxayna sheegayaan in dhaqankaa bixinta meherka ah loo rogayo qaab lagu intifaaco maalna lagu faano baddalkii uu ahaan lahaa dhaqan la muujiyo kalgacayl iyo mahadnaq.
Betty Masanja waxay taxliilisaa arrimaha qoyska waxayna kasoo jeeddaa Tanzania. "Arrinka oo dhan waa la baddalay waxaana laga dhigay haweeney inay tahay shay badeeco ah." Sidaasi ayay tiri.
''Arrinka ayaa sii xumaanaya sababtuna waa in dadku qabaan dhib dhanka dhaqaalaha ah, faqrigiina waa batay gaar ahaan qoysaska aan xubnahoodu wax baran."
"Taasi waa sababta aad u aragto in xataa qoysasku ay ugu guurinaayaan gabdhahooda ayagoo da'doodu yar tahay si meherka loo bixiyo oo uu qoysku ugu taajiro".
Laakiin ma ahan arrinku in tijaarnimo la raadinaayo oo qura, ee Betty waxay sheegeysaa in ay jirto inaan la qiimeyneyn carruurta gabdhaha ah oo in badan oo ka mid ah rag loo guuriyo si maal loo helo si wax loo baro wiil.